Holstein ụdị nke ehi: udi: njirimara na foto, mmiri ara ehi na-eri nri, ihe oriri na nlekọta, ọrịa - Ugbo - 2019
Golshtinsky (Holstein-Friesian) nke umu ehi - otu n'ime ihe kachasị achọ na-ewu ewu na ụwa.
Kasị anabata ya USA, Canada, ụfọdụ mba Europe, ma ugbu a na-arụsi ọrụ ike n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa.
Akụkọ ihe mere eme nke Holstein
Ụdị ebube a nwere akụkọ na-akpali mmasị. Ọ na-eme site na nwa ehi na-acha ọchakpọbatara USA azụ na mmalite nke narị afọ gara aga. Nke mbụ Burenka zụtara site na onye ọrụ ugbo America. V. Cheneri n'afọ 1852 na Netherlands.
O nwere ekele maka mmepụta nke umu, na site na otutu afọ nke oru ozuzu, o weputa ihe ohuru. Ná mmalite ọ Holstein-Friesianma na mmalite afọ 1980 nwetara aha Golshtinsky.
Na 1861 a nabatara ya nke ọma na america, na afọ iri ka e mesịrị, e hiwere Holstein-Frisian Breeding Society, akwụkwọ akwụkwọ ha wee pụta. Iji 1905 ná mba ahụ, enweelarị ihe karịrị isi 7,000 nke ụdị a.
A na-ahụ ụmụ anụmanụ site na mkpụrụ dị elu na ezigbo mma nke mmiri ara ehi ahụ.. A ka na-eji Holstein-friezes na-azụlite ndị ọzọ, na-enweghị ala na-enye ụdị ara ehi.
E nwekwara ụdị ọzọ nke ehi ehi, dịka: Black motley, Jersey, Simmental, Aishir, Red Steppe, Yaroslavl, Kholmogory.
Akụkụ bụ isi nke Holsteins bụ agba agba. Ọ dị ọcha na nnukwu nwa ojii.
E nwere ndị na-acha ọcha na agba, ma enwere obere akara akara ọcha na ụkwụ na ọdụ.
Ihe iche iche:
nnukwu udiri nke buru ibu;
obi omimi 80-87 cmobosara 65 cm;
Ogologo ogologo oge;
laghachi azụ 63 cm;
ahụ dị ukwuu, dị ka mkpụrụ osisi.
A na-atụle akụkụ bụ isi nke ụdị ahụ elu arụmọrụ na nnukwu oda size.
Golshtinsky - ehi ehi ara ehi n'uwa. Mkpụrụ ara ehi na abụba na-adabere na ọnọdụ nhazi na ihe oriri. Dịka ọmụmaatụ, na Izrel site n'otu onye nwere ike inweta ihe dị ka tọn 10 mmiri ara ehi kwa afọna abụba ọdịnaya adịghị karịa 3%. Na America Ọnụ ọgụgụ ndị a dịtụ iche: 8 tọn kwa afọma abụba nwere ihe karịrị 3.5%.
Na Russia ma ọ bụ Belarus enweta kwa afọ site na 7 ruo puku kilogram 7.5. N'otu oge na-egosi abụba abụba ihe dị ka 4%.
N'ụbọchị otu ladybug nwere ike inye ihe karịrị pasent 70 nke mmiri ara ehi. Naọnụọgụ mmiri ara ehi dika milking 2.5 kg / min.
Ibu arọ nke anụmanụ toro eto nwere ike ịdị iche. site na 600 (heifers) ruo 1000 kg (oke ehi). Site n'enye ihe oriri, enwere ike itinyekwu aka na 900 na 1300 n'arọ. Ogologo na-akpọnwụ nke ehi bụ ihe 145 cm, na ehi - karịa 1.5 m.
Ụmụ ọhụrụ ụmụ ehi na-erule 35-45 n'arọ. Ụmụ ehi na-eto ma na-eto ngwa ngwa. Site n'afọ ha nwere ịdị arọ bụ 250-300 kgna maka mmiri ara ehi abụghị ụdị. Ma ha na-arụpụta anụ ha abụghị obere karịa 60%.
Foto "Golshtinskoy" nke ehi:
Osisi Holstein dị oke egwu ma na-achọ ihe oriri na mmezi. Na ọnọdụ Siberia, nke dị n'ebe ugwu nke Russia, ọ fọrọ nke nta ka ha ghara ịnwụ. Ha bụ choro ka ihe ndi di iche iche di elu na ihe nnoo di elu, choro idozi nhicha na nhicha mgbe niile, na-asa akwa na ihe ndina.
N'ọhịa, ha na-anọgide na-abụkarị ụzọ rụrụ arụ. Ọ bụrụ na esoghị ihe ndị a, ụmụ anụmanụ na-enwe ọnụ ọgụgụ na njedebe.. Ha nwere ike ịdabere na ọrịa ndị na-efe efe.
Dị mkpa: Ekwadoghị maka njem ndị okenye.. Ha anaghị anabata ụgbọ njem na usoro ọgwụgwọ ọ bụla n'ihi na ha nwere mmetụta dị elu maka nrụgide.
Nbibi ọ bụla site na ọnọdụ ndị na-emekarị belata mmiri ara ehi na oke nke anụmanụ. Ndị ehi a achọrọ nri siri ike, nri na iche iche.
N'oge oyi na nri ha ga-abụrịrị ọka, ahihia ahihia, nri nri-nri, vitamin na mineral, mgbọrọgwụ osisi, silage, elu-mma hay. N'oge okpomọkụ mkpa inye ike ahịhịa ọhụrụ na nri.
Holstein cows ezigbo ahụike dị mma. Ha dị ike, ọ pụkwara ịrịa ọrịa ma ọ bụrụ na ha anaghị agbaso iwu nhazi.
Ọ bụrụ ezughị ezu na ịdị ọcha na ịdị ọchamgbe ahụ anụ nwere ike ibute ọrịa na-efe efedịka necrobacteriosis ma ọ bụ leptospirosis.
A na-eme ọgwụgwọ mgbe a nwalechara ọgwụ anụmanụ, site na intramuscular ogwu. ọgwụ nje.
Dị mkpa: Na ọdịnaya na drafts E nwere ihe ize ndụ nke mastitis.
O di nwute ogologo oge nke ehi na oke obere. Dị ka a na-achị, ha anaghị enwe ihe karịrị 3 calvings.
N'ịbụ ndị a na-azụlite n'ìgwè, àgwà ndị na-egwuri egwu na-arụ ọrụ bụ isi. A na-ejikarị ha eme ihe maka ịgafe na ndị nnọchianya nke ụdị anụmanụ ndị ọzọ, iji nwekwuo arụpụta ihe. Ntucha maka mmepụta mmiri ara ehibara uru, ma ọ bụrụ na a na-elekọta ya nke ọma.
Ụmụ anụmanụ ndị a bụ ihe ndabere nke ịzụlite n'ọtụtụ mba. Isi ọrụ nke ịzụlite bụ ịba ụba ọ bụghị naanị ihe nrịcha anụkamakwa anụ. Iji mepụta mkpụrụ otu ugboro n'afọ ị chọrọ ịmanye ụmụ ahụhụ.
Na ịzụlite na ịzụlite Holsteins, ọ dị mkpa iji hụ na ọ bụghị naanị ezigbo oriri na-edozi ahụkamakwa na-agbaso iwu nke ọdịnaya. Mgbe ị na-ahọrọ ehi, a ghaghị iburu ya n'obi na nke a n'onwe ya bụ nke ọma ụdị ọnụ. Tụkwasị na nke a, chọrọ ego dị ukwuu maka ịzụ na ndozi. Mba anya onwe ya Holstein ehi naanị n'ihe banyere nlekọta ruru eru.
Cotyledon - osisi osisi na-enweghị atụ: ụdị nke ifuru na foto
Ntụziaka maka ọgwụ vitamin! Njirimara bara uru nke garlic tincture na mmanya uhie na aro na iji
Timpany rumen na ehi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Otu n'ime umu ehi nke kachasị ewu ewu na nke kachasị ewu ewu n'ụwa bụ Holstein mmiri ara ehi.